Cabitaanka reer Kolombiya, astaamaha | Safarka Absolut
Cabitaanka reer Kolombiya, noocyada
Dal waliba wuxuu leeyahay khamri ama cabitaan qaran oo u gaar ah. Mid ka mid ah Colombia waa xikmad, Shaki la'aan sharaabka ugu caansan uguna caansan. Nagu soo biir safarkan aan ku dhex marayno wadamada Colombia si aad uga hesho kuleylka iyo dhadhanka niyada ugu fiican.
Ugu horreyntii, waa in la caddeeyaa in khamriga (oo loo yaqaan magacyo kala duwan meelo kala duwan oo adduunka ah), uu yahay cabitaan ugu da'da weyn sida uu u ballaaran yahay. Waa la ogyahay taas hore ayaa loo kala diray xilliyadii dhexe. Magaca "biyaha kulul" waxaa loola jeedaa aalkolo badan oo uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigtay walax ololi karta. Magac kale oo naxariis leh oo sidoo kale la isticmaalay lana sii wado in la isticmaalo ayaa ah kan "biyaha nolosha" (biyaha nolosha), oo kicinaysa waxa ku jira ruuxiisa.
La bakoorad sonkor ah, oo asal ahaan ka soo jeeda Koonfur-bari Aasiya, wuxuu ku yimid Ameerika gacanta Isbaanishka. Maqaarka-bakooradda ayaa soo saartay khamriyo kala duwan sida ron gobolka Kariibiyaanka iyo cacca gudaha Brazil. Marka laga hadlayo gobollada Andean, natiijadu waxay noqotay mid summad leh. Aaminsanaanta ballaaran ee ah in sumcadda reer Colombia ay ka soo jeedo cabitaan hore oo Quechua ah maahan wax ka badan quraafaad.
Jaangooyadii ugu horreysay ee Nueva Granada waxay ka bilaabmaysaa wax aan ka yarayn 1784: "Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino", oo ku taal Villa de Leyva. Xorriyadda ka dib, gobolka Kolombiya ayaa sharciyeeyay soo-saarista astaamaha, mamnuucaya soo-saarista farsamada.
1 Astaamaha astaanta caanka ah ee reer Colombia
2 Noocyada ugu fiican
3 Sida loo cabbo khamri
Astaamaha astaanta caanka ah ee reer Colombia
Brandy-ka caadiga ah ee reer Colombia waxaa laga helaa saldhig ka mid ah 94% ama 96% aalkolo urursan ayaa laga soosaaray bakooradda sonkorta. Khamrigani waa mid aad u qalalan, laakiin waa lagu jilcay nuxurka suuxdinta iyo sharoobada sonkorta. Soo saare kasta wuxuu leeyahay cuntadiisa gaarka ah iyo gobol walba dhadhankiisa.
Way ku adkaan kartaa qofka khamriga caba inuu helo waxyaabo kala duwan oo kala duwan. Si ka duwan cabitaannada kale sida whiskey, brandy (sidoo kale loo yaqaan guaro) ma bixiyo caraf cad ama dhadhan. Taas macnaheedu maaha in taxaddarka ugu badan aan laga qaadin in la ixtiraamo tirada iyo saamiga cabbitaankan siiya nuxurka ugu badan ee saxda ah, liddi ku ah. Waxay qaadataa, haa, dareen si wanaagsan loo tababaray oo ur iyo dhadhan fiican leh si loo qabsado oo loo raaxeeyo.
Khamriga waxaa lagu cunaa Kolombiya siyaabo badan
Markaad dhadhamiso astaamaha caanka ah ee reer Colombia, waa lagama maarmaan inaad tixgeliso qalin jabintiisa sare. Waa suurtagal in cabitaankii ugu horreeyay uu "gubto" afka, laakiin kuwa soo socda waxaad horayba u bilaabi kartaa inaad ku qanacdo diirimaadka iyo nuuxnuuxsiga aan ku sheegnay tuduca hore.
Sidoo kale waa cadaalad in la tilmaamo in calaamadda reer Colombia aysan ka imaaneyn Colombia boqolkiiba boqol. Xaaladaha badankood, suufka lagu sameeyo waxaa lagu sameeyaa saliidaha lagama maarmaanka ah ee laga keeno Spain; dhinaca kale, khamriga bakooradda (loo yaqaan tafaa jargonka soo saarayaasha) wuxuu inta badan ka yimaadaa Ecuador.
Noocyada ugu fiican
Waxaa jira noocyo badan oo la aqoonsan yahay oo ka mid ah noocyada caanka ah ee reer Colombia. Khamriga Antioquia Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan gudaha iyo dibedda xuduudaha dalka. Waxaa lagu soo saaraa Xarunta Antioquia Liquor Factory (FLA) oo ka timaada aaladaha, malabka iyo sonkorta bakooradda, iyadoo la siinayo saddex nooc: buluug dabool, koofiyad casaan iyo koofi cagaaran. Waa inaan sidoo kale iftiimino noocyo cayiman oo la yiraahdo Xaragada Royal 1493 leh udgoon casri ah oo si taxaddar leh loogu duubay dhalo dhalo raaxo leh halkaas oo xardhan bakoorad sonkor ah iyo ubax anise ah.
Noocyada ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Colombian brandy'
Antioqueño tartanka ugu weyn ee heer qaran waa astaan Nectar, lagu sii daayay Cundinamarca. Calaamaddan ayaa sidoo kale bixisa noocyo gaar ah oo caan ah oo loo yaqaan Nectar Premium, oo leh dhadhan macaan oo ka macaan.
Dhawaan astaanta ayaa sidoo kale noqotay mid caan ah Kun jinni, magaalada Cartagena de Indias. Xantaani waxay ku faantaa in la sameeyay ka dib qaabkii hore ee khamriga qarsoodiga ah ee xilligii gumeysiga. Waxay noqon kartaa uun buun buunin, laakiin maxaa diiday inaad isku daydo?
Noocyo kale oo caan ah oo caan ka ah dalka Kolombiya ayaa ah Valle Blanco, Caucano, Cristal, Hogaamiyaha, Llanero, Nariño, Asal, Platinum y Saddex geesood, iyo kuwo kale oo badan. Khamrigan waxaa lagu soo saaray 16 ka mid ah 32 waaxood ee dalka, sidaas darteed waxaa jira waxyaabo badan oo laga kala xusho.
Sida loo cabbo khamri
Su'aashan, ku dhowaad dhammaan dadka reer Colombia waxay ka jawaabi doonaan iyaga oo aan daqiiqad ka laba-labayn in, wixii ka sarreeya, midkoodna waa inuu cabo sumadda "shirkad wanaagsan." Waa in la xusuusnaado inay tahay cabbitaan khamri badan oo loo baahan yahay in lagu cabo si dhexdhexaad ah. Kuwani waa qaaciidooyinka ugu caansan:
shot (toogasho), muraayadaha oo aad u yar. Way kafiican tahay adeegida heerkulka qabow, in kastoo dhinaca kale, qayb ka mid ah liinta iyo dareenka miraha ayaa lumay.
Dhalada gaaban, ikhtiyaar ahaan u weheliso taabasho biyo ah ama soodhaha oo lagu daro liin yar yar.
Dhalada dhaadheer, oo leh baraf badan oo ay la socdaan miro kuleyl ah ama casiirka liinta.
Si loo raaco astaamaha, khubaradu waxay kugula talinayaan in miraha kuleylka ah loo isticmaalo qaybo yar. Qumbaha iyo liinta sidoo kale "si fiican ayey u guursadaan" cabitaankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cabitaanka reer Kolombiya, noocyada
Kolombiya waxaan ku leenahay noocyo kala duwan oo ah dhirta iyo digaagga oo keliya laakiin sidoo kale dhaqanka: gobol kasta waxaa lagu gartaa dhaqankiisa, gastronomy-ka iyo caadooyinkiisa.
In Boyacá tusaale ahaan: waxaan ku leenahay Tunja, warshada Boyacá khamriga, halkaas oo lagu soo saaro sumadda Lider, Onix shaabad madow iyo Rum Boyacá.
Waxaa jira goobo dalxiis dalxiis sida Villa de Leyva, Tensa Valley, Paipa, Tunja. Halkan waxaa ku yaal meelo xiiso leh oo dib ugu soo laabtay gumeysiga sida Santiago Apostol Metropolitan Basilicia Cathedral, Guriga Aasaasihii, Captain Gonzálo Suárez Rendón, Guriga Escribano Juan de Vargas, guriga Hinojosa oo wax badan siiyay ka hadal gumeysiga, Diiwaanka Gobolka ee Boyacá oo leh taariikh weyn, Pozo de Hunzahúa ama Donato si fiican, barkimooyinka shaydaanka, oo ah meel ay Chibchas ku caabudaan qorraxda iyo dayaxa maalin kasta isla markaana allabaryo ugu sameeyaan ilaahyadooda, taallo loogu talagalay Qamadiga, oo sida taariikhdu qortay uu ahaa meeshii sarreenka lagu beeray markii ugu horreysay Ameerika xilliyadii gumeysiga.
Jawaab MARIA ESTHER RICO
Javier Delgado Sinta dijo
Antioqueño brandy sida loo cabo
Jawaab Javier Delgado Sinta
Qalabka muusikada Shiinaha
Shuruudaha guurka Noorway